Ny Tetik'asa Xassumos tsara indrindra ho an'ny Tetik'asa 24 ho an'ny lehilahy sy vehivavy - tetikasam-pahaizana momba ny totozy
Tetik'asa tsara indrindra amin'ny 24 Compass Tattoos ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
sonitattoo Jolay 17, 2016
Tattoo Compass dia tatoazy malaza izay efa nisy nandritra ny taona maro izao. Ny marika dia nampiasain'ny tantsambo nandritra ny taona maro satria mieritreritra izy ireo fa hanampy azy ireo hamelona ny rano mihozongozona izy ireo ary hiantoka azy ireo hody soa aman-tsara.
Tattoo Meaning Compasses
Ny iray amin'ireo antony mahatonga ny olona handao ny tatoazy dia noho ny asehony. Tattoo ny Compass dia manana dikany isan-karazany fa ho an'ireo izay ao anaty rano kosa, tena sarobidy tokoa izany. Midika izany ny famantarana ny vintana, fiarovana ary fanohanana. Ny tatoazy dia tonga amin'ny karazana sy ny karazany. Misy karazan'ireny tatoazy ireny izay misy fanazavana marobe amin'ny mpampiasa. Ny nofy iray dia iray amin'ireo dikan'ny tatoazy. Tsy voatery mandroso lavitra ianao mba hampahafantarana ny hafa ny fomba fiainanao. Amin'ny alalan'ity tatoazy ity, mora kokoa aminao ny mitantara ny tantaranao tsy misy feo.
Ny sary maneho ny ampahany amin'ny vatan'ny #tattoo dia sahy miteny aminao hoe nahoana ianao no nanoratra ny tatoazy tamin'ny voalohany. Mahazo tari-dalana sy fitarihana izy io, ary koa manamarika ny vintana tsara. Izany no antony ahitan'ny sarivongana maro be eny amin'ny sambo maro be. Ny lazan'ny tatoazy dia zavatra tianao ho tianao rehefa mahita azy ianao. Amin'io andro io dia tsy ireo lehilahy izay mampiasa azy io fa ireo vehivavy izay te-hijery modely.
Ny fiarovana dia iray amin'ireo antony mahatonga ny olona hampiasa azy io sy ny tantsambo, mahita azy io ho mariky ny vintana tsara. loharanon-tsary
Matetika isika no mahita ny marika famantarana ireo sambo izay tafiditra ao anaty sambo sasany koa ho mariky ny vintana tsara. Ny tantaran'ireo olona nanjavona nandritra ny onjan-dranomasina mahery dia nanampy ny tatoazy ho an'ny olon-tsotra mba ho ankasitrahan'ny olona mampiasa azy ireo. loharanon-tsary
Inoana fa miaraka amin'ny famantarana toy izany eo amin'ny vatana, dia misy fanantenana ny hahita olona velona. loharanon-tsary
Misy karazan-javatra samihafa sy karazany hafa miaraka amin'ireo tatoazy ireo. Misy kômpà toy ny compass prismatic, compass Vegvisir, compassa compost, compass astra ary kintana kintana mba hanononany ny sasantsasany amin'ireny compasses ireny loharanon-tsary
Ny dikan'izany dia hoe mety tsy ho tantsambo ianao hampiasa ny tatoazy. Ny malaza indrindra amin'ireo kompas dia ny kintana kintana izay ampiasaina hanondroana ny Star Star. loharanon-tsary
Ny Star Star dia nampiasaina talohan'ny teknolojia ary tonga ny sarintany mba hanampy ny olona hahazo ny torolàlana. loharanon-tsary
Ny tato kintana dia manondro fitarihana, fitarihana ary fitaovana ahafahana mahazo tokantrano. loharanon-tsary
Ny fotoana sy ny compass dia tafaraka hatrany. Ny fomba tsotra ahafahana manao izany dia ny fampidirana ny gorodona na ny famantaranandro ao amin'ny #design ny compass. loharanon-tsary
Ny tany sy ny sarintany koa dia manana andraikitra goavana tahaka ireo kompà izay manampy ny olona hahitana ny fitarihana marina. loharanon-tsary
Ireo takelaka compass koa dia ampiasaina hanehoana ny nofinofin'ny olona. Amin'ny tatoazy fitaratra, ianao dia matoky fa ny nofinanao eo amin'ny fiainana dia tsy ho rava. loharanon-tsary
Hevitra mikasika ny Tattoo tsara tarehy tsara tarehy
Ny kompass dia hanampy anao hifantoka amin'ny fanirian'ny fiainana. Tsy voatery handao ny kompà ianao raha tsy milalao azy. loharanon-tsary
Azonao atao ny manisy marika samihafa aminy raha tianao. Ianao no tena mahalala izay tianao hatao amin'ny fiafaran'ny andro.
Raha manana tatoazy tsara ianao, dia miala sasatra ianao satria izy no hanome anao an'io fikasana io hampitsoka ny sainao. Ny kompà dia afaka apetraka amin'ny ampahany amin'ny vatanao. loharanon-tsary
Misaotra noho ny fahasamihafana goavana tamin'ny famoronana tatoazy manerantany. Tsy afaka mahita tatoazy ianao ary tsy hijery fanindroany. loharanon-tsary
Tsy misy karazam-pandeha izay tsy ahafahantsika mamakivaky ilay kompà. Izany no antony mahatonga ny olona hampiasa tatoazy toy izany ankehitriny. loharanon-tsary
Ny fametahana tato ho an'ny kompà dia afaka manasongadina ny ampahany amin'ny vatany. Indraindray, mahita tattoos ny kôpôtia mijery tsy mahazatra. loharanon-tsary
Ny tato ho an'ny kompà dia azo lazaina fa ny Star Star symbol ary lasa lasa marika famantarana maro. loharanon-tsary
Ny olon-drehetra dia afaka mampiasa ity tatoazy ity satria maneho na manondro ny fifantohana na ny fitarihana. Ho an'ireo izay mieritreritra ny tetikasa hanombohana na ireo izay naharesy toe-javatra iray manokana, afaka mampiasa ity tatoazy ity izy ireo mba hampahatsiahy azy ireo momba ny ho avy na ny lasa. loharanon-tsary
Inona no azonao lazaina momba io tatoazy io? Ny endriny dia mahafinaritra indrindra indrindra amin'ny famolavolan-bozaka. loharanon-tsary
Ny feny dia afaka maneho sexy ho an'ny vehivavy raha toa ka afaka manana izany tatoazy izany izy ireo. Misy karazany hafa izay azonao ampiasaina rehefa manamboatra tatoazy momba ny zavatra iray. loharanon-tsary
Tsy misy zavatra mahagaga toy ny karazana kompà izay afaka mampiseho hafatra mahery ho anao amin'ny maha-vehivavy anao. Ny kompà dia afaka mandeha amin'ny fomba rehetra mba hiantohana fa ny feonao dia miteny hafatra mafy. loharanon-tsary
Ny vehivavy dia ho tia an'io tsotra nefa tato ho ato io. Maro ny zavatra hita eo amin'ny kompass mba hanampy ny mpampiasa hitazona ny fampanantenana sy hino zavatra maro. loharanon-tsary
Ny ambiny dia azo ampiasaina amin'ny fampisehoana tattoos masom-bolo eny an-damosina. Ny lamosina dia toerana iray izay ahafahana manintona sy mampatahotra ny tatoazy noho ny drafitra mahafinaritra. loharanon-tsary
Tsy ny vehivavy ihany no mpankafy ny tatoazy. Mazava ho azy, fantatsika fa ireo lehilahy ireo dia afaka mahazo ny fiaraha-misakafo rehefa tonga amin'ny tatoazy toy ity. loharanon-tsary
Tsindrio eto raha te hahalala bebe kokoa Tattoo Designs
tattoos rahavavyanjely tattoosHeart Tattoosraozy tatoazytattoo infinitydiamondra tattoofitiavana tatoazyNy zodiaka dia mampiseho tatoazyTattoo Feathertattoos armkoi fish tattoomozika tatoazymehndi designtattoo octopustanana tatoazyarrow tattootratra tatoazyhenna tattoonamana tattoos tsara indrindratato ho an'ny vatofantsikaAnkle Tattoostattoo ideastattoos crossscorpion tattootattoo watercolortatoazy fokotattoos ho an'ny lehilahymasoandro tatoazytattoos footrip tattoostattoos mahafatifatytattooscompass tattooloto voninkazolion tattooscat tattoostattoos sleeveeagle tattoostatoazy voninkazotatoazy ho an'ny zazavavytattoo eyetatoazy lolotattoo cherry blossomtattoos voronatattoostattoos backelefanta tatoazytattoos mpivadymoon tattoosTatoazy ara-jeometrika